Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny fizahan-tany any Jamaika dia miantso ny feon'ny firaisam-pirenena Karaiba hanoherana ny tsy fitoviana amin'ny vaksininy
Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny fizahan-tany ao Jamaika dia miantso ny fananana fitoviana vaksiny manerantany
Rehefa mihombo ny ezaka ataon'ny mpiray antoka isam-paritra mba hamerenana ireo mpizahatany sy hanarenana ity sehatra ity aorian'ny fianjerana vokatry ny valanaretina COVID-19, ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia niantso ny mpitondra Karaiba hanandratra ny feon'izy ireo hiady amin'ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny.
Iray amin'ny olona 500 mahery any amin'ny firenena mahantra no nahazo ny vaksiny COVID-19.
Amin'izao taha izao, firenena 92 ​​mahantra indrindra eto an-tany dia tsy hahatratra ny tahan'ny vaksiny 60 isanjaton'ny mponina ao aminy hatramin'ny 2023 na ho avy.
Raha tsy misy fitoviana amin'ny fizarana vaksininy dia tsy hisy ny fanarenana ny fizahan-tany sy ny toekarena.
“Raha iray amin'ny olona efatra any amin'ny firenena manana vola be izao no vita vaksiny fanoherana ny COVID-19, iray monja amin'ny olona maherin'ny 500 any amin'ny firenena mahantra no nahazo jab. Miorina amin'ny firongatry ny tsy fitoviana amin'ny vaksiny ankehitriny dia vinavinaina fa ny firenena mahantra indrindra eto an-tany 92 dia tsy hahatratra ny tahan'ny vaksiny 60 isanjaton'ny mponina ao aminy raha tsy ny 2023 na ho avy », hoy ny alahelo nataon'ny minisitra Bartlett.
Izy no nandefa ny kabary ifotony nandritra ny forum virtoaly iray momba ny: "Diplomasian'ny fizahan-tany: fanarenana ny fizahan-tany soa aman-tsara", natolotry ny fizahan-tany fizahan-tany fizahan-tany (TLN), fizarana iray amin'ny Tahiry fampivoarana ny fizahan-tany (TEF). Ity fivoriana ity no voalohany tao anatin'ny andiany forum dimy an-tserasera, notarihan'ny tambajotra fahalalana an'ny TLN.
Mikasika ny maha-zava-dehibe ny indostria, nilaza ny minisitra Bartlett fa porofo azo itokisana dia nanondro fa ny fizahantany dia nahazo ny toeran'ny indostria izay lehibe loatra ka tsy hahomby. Mikasika izay indrindra, hoy ihany izy: "Noho izany ilaina ny hahatafavoaka velona mandritra izany ary ivelan'ny krizy ankehitriny mba hahafahany manohy manatanteraka ny anjara asany lehibe amin'ny maha-loharanom-pahefana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny toekarena manerantany."
Na izany aza, nanamafy izy fa raha tsy misy fitoviana amin'ny fizarana vaksininy dia tsy hisy ny fahasitranana ho an'ny fizahantany, indrindra ireo nosy Karaiba izay miankina betsaka amin'ny indostria.